Ɛpo Mu Ahweaa Ho Nhwi | Wɔbɔe Anaa?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
MMOA a wɔte nsu a ɛyɛ nwini mu bebree wɔ sradeɛ pii wɔ wɔn wedeɛ mu. Wei boa wɔn ma awɔw nkɔ wɔn mu. Biribi foforo nso wɔ hɔ a ɛboa ɛpo mu ahweaa (sea otter) a ɛmma awɔw nkɔ ne mu. Ɛno ne ne ho nhwi fukufuku no.
Susuw ho: Ɛpo mu ahweaa ho nhwi mu yɛ duru sen mmoa a aka nyinaa. Sɛ wokan nhwi a ɛwɔ ne wedeɛ mu a, nsateakwaa ahinanan biara, wubenya nhwi bɛyɛ ɔpepem baako (sɛntimita ahinanan biara 155,000). Sɛ ɛpo mu ahweaa reguare nsu mu a, ne ho nhwi no twe mframa kata ne wedeɛ ani. Ɛba saa a, nsu nka ne wedeɛ no na ama awɔw ade no.
Sɛnea ɛpo mu ahweaa ho nhwi te no, nyansahufo gye di sɛ yebetumi asua biribi afi mu. Wɔayɛ nhwi ntade nguguso pii asɔ ahwɛ. Ebi wɔ hɔ a, wɔma nhwi no yɛ atenten, na ebi nso wɔde nhwi ntiantiaa na ɛyɛ. Ebi nso deɛ, nhwi no bemmɛn ho. Ebi nso, wɔtete ntam. Wɔn a wɔyɛɛ nhwehwɛmu no ahu sɛ, “sɛ wɔma nhwi no mu yɛ duru na ɛsan yɛ atenten a, ɛyɛ den sɛ nsu betumi afa mu.” Enti sɛ yɛbɛka a, ɛpo mu ahweaa betumi ahoahoa ne ho sɛ ɔhyɛ nhwi atade a nsu ntumi mfa mu.
Nyansahufo gye di sɛ, nhwehwɛmu a wɔreyɛ no bɛma wɔanya nimdeɛ pii a wɔde bɛyɛ ntade a nsu ntumi mfa mu a obiara nyɛɛ bi da. Wei nti, ebia ebinom bebisa sɛ, adɛn nti na wɔn a wɔdɔ asukɔ kɔ nsu a ɛyɛ nwini ase no nhyɛ nhwi ntade a ɛte sɛ ɛpo mu ahweaa deɛ no bi?
Wudwen ho sɛn? Wohwɛ sɛnea ɛpo mu ahweaa ho nhwi bɔ ne ho ban na ɛmma awɔw nkɔ ne mu no a, wobɛka sɛ ɛno ara na ɛbae anaa obi na ɔbɔe?